Ajụjụ ọnụ Diners Club: Iwulite Sociallọ Ahịa | Martech Zone
Diners Club bụ onye nkwado nke Social Media Ahịa Worldwa ma na-agba ụfọdụ ndị ọkà okwu ajụjụ ụnyaahụ (ọ ga-emekwa karịa taa). Enwere m obi ụtọ iso ya kwurịta okwu Eduardo Tobon na-atụle ọganihu ndị m hụrụ na ebe ahịa ịntanetị.
Ajuju mbu banyere ihe nlekota oru ulo oru na atumatu 3 nke m ga enye. Ọ bụrụ na m ma ihe, m gaara asị na zụrụ nke m Bloglọ ọrụ ịde blọgụ akwụkwọ :). Ekwetaghị m na m kpuchiri ajụjụ a ka m wee mee nke a:
Zụlite usoro ọdịnaya ma mee atụmatụ maka onye ndị ị na-ege ntị bụ na otu ị ga-esi nye ha ọdịnaya gị n'ịntanetị.
Soro SEO ndụmọdụ -enyere gị aka ịmata Keywords na-ebuli gị blog nke mere na ị na-n'aka na-edepụtara nke ọma site na search engines.
Zụlite ụzọ gị iji tinye aka n'ihi na ndị na-agụ akwụkwọ na-aga ebe ị chọrọ ka ha gaa… ya mere, site na ọdịnaya gị, kpọọ oku ka ị mee ihe, gaa na peeji ọdịda ọdịda dabara nke ọma ebe ị nwere ike ịlele nzaghachi ma gbanwee ndị na-agụ ya ahịa.
Banyere ọganihu na-atọ ụtọ, enwere m obi a aboutụrị maka ọganihu nke nyiwe ndị na-enyere ndị ahịa ahịa iwebata, jikwaa ma tụọ usoro mgbasa ozi ha na ọdịnaya ha. Dika nyiwe ndia abanyela nke oma, onu ahia ha adighi. Anyị na-ahụ ọnụ ahịa na-agbada nke ukwuu na mpaghara a. A na-ere ọnụahịa ọtụtụ nyiwe bara ọgaranya dị n'etiti $ 250 na $ 1500 kwa ọnwa… maka ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Ọ dị mma ịhụ Diners Club mmiri banye na mgbasa ozi mmekọrịta dị ka nke a - ka ha na-ebute atụmatụ mgbasa ozi nke ha. Organizationstù ndị mbụ dị ka nke a nwere ndị ahịa na-anwụ anwụ ma na-ejide ya dị ka akara ngosi mba. Kesa akuko banyere ndi ahia ha gha eme ka ulo ha mee ka ndi otu ha bi ndu.
Lelee mkparịta ụka ndị ọzọ
Tags: ụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ oriri na ọersụersụdouglas karrEduardo TobonAjụjụ ọnụsmmw 2013mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi